Community Archives - Bijay Dimdong
योगको राशी–चक्रअनुसार सूर्य वरिपरि पृथ्वीले परिक्रमा गर्ने कक्ष (orbit) लाई २७ खण्डहरूमा विभाजित गरिएको छ, जसलाई नक्षत्र भनिन्छ । प्रत्येक नक्षत्रलाई थप चार बराबर भागहरूमा विभाजित गरिएको छ, जसलाई पद भनिन्छ । ४ लाई २७ ले गुणान गर्दा १०८ हुन्छ । एउटा नक्षत्र भनेको चन्द्रमाले पृथ्वी वरपर परिक्रमा गर्ने कक्षको आधा भाग हो । मानव शरीरमा हुने […]
सद्‌गुरु: हजारौँ वर्षअघि पराशर नाम गरेका महान् ऋषि थिए । अथाह ज्ञान भएका यी बुद्ध पुरुष पराशर महर्षिका नामले परिचित थिए । त्यसबेला समाजमा यस्तो परिस्थिति सृजना भयो, जहाँ राजाहरू सत्ता र शक्तिमा लिप्त भएर मात्तिन थाले अनि ब्राह्मणहरूको धर्मलाई सम्मान गर्न छाडे । साथै, धेरै हदसम्म ब्राह्मणहरू पनि भ्रष्ट भएका थिए, जसकारण आफूले पाउने गरेको […]
सद्गुरु मैले भर्खरै पढेको इटलीमा डल्फिन समुन्द्र तटको छेउछाउ आउछन ? पोल्याण्डमा हरिण रोड घुमिरहेको छन्। चीन र अरु केहि देश हरुमा प्रधुषणको स्तर केहि कम भइ रहेको छ। के यो प्रकृतिको हामीलाई पाठ सिकाउने तरिका हो ? हामीलाई Human Being भनेर भन्छन। यस ग्रहमा अन्य कुनै पनि प्राणी लाई Being भन्दैनन्। हामी Human Being […]
दैनिक जसो एउटा पुस्तक सार्वजनिक भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ । प्रकाशनको गति यति धेरै भइसक्यो, ती सबैको खबर सार्वजनिक गर्न हरेक मिनेट अपडेट हुने अनलाइन पत्रिकाहरु पनि असमर्थ हुन थालेका छन् । यसबाट पुस्तक प्रकाशनको क्रम बढेको मात्र होइन, पठन संस्कृति पनि उकालो लागिरहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । बजारमा लेखकहरु सेलिब्रेटी हुँदै गएका […]
मैले देखेको नेपाल डा. हर्क गुरुङले लेखेको पुस्तक हो । नेपालका कुना-कन्दरा, पहाड-पर्वत, भावर र दुन पैदल हिंडेरै पुग्ने थोरै नेपालीहरुम पर्छन हर्क गुरुङ। हिंड्नु त एउटा पहाडी गाउँमा जन्मेका उनको बाल्यकालको नियति नै थियो | तर विदेशमा पढेर आएपछि पनि उनले नेपाल यात्रालाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाए | उनका लागी त्यस्तो यात्रा आफ्नो जन्मभूमिलाई […]
चीनको एक प्रसिद्ध ग्लोबल टाइम्सले मुख्य समचारको रूपमा एक समाचार छापिएको छ– चीन अँध्यारो क्षणबाट बाहिर आयो । यो समाचारमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वुहानमा भएको यात्रालाई निकै प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । अनि दाबी गरिएको छ– चीनमा अब कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या निकै घटेको छ । […]